यौन सबै सजिव प्राणीको आवश्यकता हो । यौन सम्बन्धले मानव जीवनमा धेरै महत्व राख्दछ वैवाहिक जीवनमा यसले धेरै प्रभाव परेको हुन्छ । नेपाली समाजमा विवाहपश्चात् मात्रै यौनसम्पर्कलाई वैधता दिइन्छ । यद्यपी पछिल्लो समय विवाह...
काठमाडौँ । गहिरो सास फेर्नु, मुटु बेस्सरी धड्किनु र आँखाको नानी ठूलो हुनु । यो सब त्यतिबेला हुन्छ जब तपाईं एक–अर्कालाई ओठमा चुम्बन गर्नुहुन्छ । तर चुम्बनले किन तपाईंको शरीरमा उत्तेजना पैदा गर्छ ?...
विमान दुर्घटना अघि पाइलटले लगातार ‘मेडे’ किन भन्छन् ?
काठमाडौँ, १६ जेठ । मेडे वास्तवमा ‘डिस्ट्रेस’ कल हो जसले कुनै आपतकालीन अवस्थाको वर्णन गर्छ । यो कुनै घातक दुर्घटनाको आशंकामा भन्ने गरिन्छ । हुन त यो शब्द हवाईजहाज वा जहाजमा विशेषगरी प्रयोग गरिन्छ...
‘श्रीमान्‍को हत्या कसरी गर्ने ?’ भन्ने किताबकी लेखिका अहिले श्रीमानको हत्यामा दोषी ठहर
‘तपाईको श्रीमान्‍को हत्या कसरी गर्ने (हाउ टु मर्डर योर हसबेन्ड)’ लेख्ने न्यान्सी ब्रोफीलाई बुधबार पोर्टल्याण्डको अदालतले उनको श्रीमानको हत्याको लागि दोषी ठहर गरेको छ । सजाय सुनाइँदा ७१ वर्षीया ब्रोफी प्रतिक्रियाविहिन रुपमा मौन बसेकी...
संसारमा यस्ता धेरै व्यक्ति छन् जो आफ्नो अनौठो व्यवहारका कारण चर्चामा आउने गर्छन् । यस्तै एउटा अनौठो घटना जापानबाट आएको छ, जहाँ एक व्यक्तिको कुकुर बन्ने शौखले सबैलाई छक्क पारेको छ । टोको नामका...